Apk Mod Youtube shaashadda dib uqabashada oo bilaa xayeysiis ah xidid ma leh | Androidsis
Francisco Ruiz | | Xididka Android, APK, Codsiyada Android, Tababarada
Qoraalkan cusub waxaan kuugu keenayaa Waxkabadal Youtube apk leh dib uqabsasho asalka ah oo karti leh, oo aan lahayn xayeysiis iyo sida ugu fiican oo dhan adigoon haysan terminal xididaysan.
Waxaas oo dhami waa suurtagal sida had iyo jeer loogu mahadnaqo golaha Horumarinta XDA, madasha ugu fiican ee ku saabsan horumarka Android, barnaamijyada, ROM-yada, mawduucyada iyo barnaamijyada guud ahaan. Kadib waan sharaxayaa sida loo soo dejiyo labada apks ee lagama maarmaanka ah haddii aad raadineyso wax walba oo adiga kuu shaqeynaya, labadaba isku xidhka Google's Chromecast ee gudbinta shaashadda iyo si aad ula jaanqaadi karto iyada oo aan wax dhibaato ahi ku jirin koontadaada Google si aad u wada hesho waxyaabaha aad ugu jeceshahay.
Waxaa laga yaabaa inaad doorbideyso ku soo dejiso fiidiyowyada Youtube-ka Android si aan mar dambe u aragno. Xiriiriyaha aan hadda kaaga tagnay, waxaan ku sharxi doonnaa sida loo sameeyo
Si aad u bilawdo, waxaan kuu sheegayaa in codsigan ama nooca kale ee wax laga beddelay ee YouTube uu ku saleysan yahay gabi ahaanba nooca rasmiga ah, in kasta oo lagu beddelay dhammaan horumaradaas aan soo sheegay iyo beddelka saxeexa la sameeyay si aanu uga hor iman barnaamijkayaga rasmiga ah ee YouTube. . Tan waxaan uga jeedaa Muhiim ma aha in la tirtiro barnaamijka rasmiga ah ee YouTube si aad u awoodo inaad rakibto qaabkan.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno si aan u awoodno inaan rakibno labadan apk ee lagama maarmaanka ah, waa inaan galno dejimaha nidaamkayaga Android iyo Xulashada Amniga waxay awood u siineysaa ikhtiyaarka noo oggolaanaya inaan ku rakibno codsiyada ka baxsan Suuqa Google, ama waxa ku yimaadda isla wax, awood u lahaanshaha rakibida barnaamijyada laga helo ilo aan la garanayn ama asal ahaan aan la garanayn oo ka badan barnaamijyada lagu soo dejiyo qaabka apk.
Marka tan la sameeyo waxaan waxaan kala soo baxnaa apk-ka ku habboon mowduuca midabka ee aan dooneyno inaan ku rakibno barnaamijkeenna Android adigoo gujinaya xiriiriyahan. Waxaan ku dooran karnaa cawl / madow, casaan / madow iyo ikhtiyaar Vanced ah oo shaqsiyan aanan isku dayin.
Iyadoo apk lagu soo dejiyey xusuusta gudaha ama dibedda ee terminal-keena Android, hadda waxaan aadeynaa soo dejiso abka labaad, apk in Waxay noo oggolaaneysaa inaan ku galno koonteena Google oo aan awoodno inaan shaashadda ugu dirno dhanka Chromecast iyo aalado la mid ah.
Hadda waxay noqon doontaa oo kaliya ku filan ku rakib apk Youtube MOD marka hore ka dibna MicroG apk, waxaan tan ku samayn doonnaa iyada oo aan la raadinayno fayl baare kasta oo loo maro dariiqa soo dejinta ee aan ugu talagalnay markii hore, xaaladaha badankood galka Download oo ku yaal xididka xusuusta gudaha ee qalabkeena Android.
Aniga qudhaydu waxaan ku tijaabiyay barnaamijka LG G6-kayga, iyo shaqada labadaba sii wad dhageysiga fiidiyowyada Youtube ee qeybta hore ama xitaa shaashada dansan, sida shaqada ee xannibo xayeysiis aan xidid lahayn waxay u socotaa si qumman. Dabcan, waxay ahayd inaan soo dejiyo oo aan rakibo labada apk ee aan horay u soo sheegay si aan u sheegay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » [APK] MOD Youtube leh dib-u-soo-celin xagga dambe ah oo karti leh, xayeysiis la'aan iyo u baahnayn xidid
Sideen u soo dejisan karaa saaxiib!
Waan jeclahay fiidiyowyadaada
Jawaab Raul Castellano
Waxaa jira mid kafiican oo la yiraahdo OGyoutube
Ku jawaab Gyovani
Way fiicantahay, laakiin kuuma oggolaanayso inaad soo dejiso wax kasta oo ka kooban, ha ahaato fiidiyo ama maqal. Dhinaca kale (sida OG Youtube), waxay si wax ku ool ah u oggolaaneysaa ka ciyaarida asalka iyo shaashadda, laakiin dib u ciyaarista ayaa la joojinayaa ka dib laba fiidiyow (shaashad) oo qalad ku siiya. Maaha wax ku habboon in la furo barnaamijka si aad u gujiso "dib-u-dhexgalka". Tani waxay ku dhacdaa si toos ah loogu ciyaaro, fiidiyow (muusig) gudahood ah oo muddo dheer soconaya, taasi ma dhacdo. Inta soo hartay, ikhtiyaarkaasi waa wanaagsan yahay. Labadaba barnaamijkan iyo OG Youtube labaduba si isku mid ah ayey u sameeyaan dhinacaas.
Jawaab Hector Barragan Castillo
Xidigle 90 dijo
Waa inay dhigaan dunta asalka ah, mahadsanid.
Sawirka booska Fabian Molina dijo
Wanaagsan, muddo dheer ayaan raadinayay wax sidan oo kale ah ... mahadsanid
Ku jawaab Fabian Molina
Waad salaaman tahay sababta aanan ugu rakibi karin khaladaadka calaamadayda moto G4 ee falanqaynta xirmada?
Waad salaaman tahay, dhibaato ayaa i haysata, markaan rabo inaan galo, waxaan geliyaa marinka waxayna ii sheegtaa "Youtube shaqadii way joojisay" kaliya waxay dhacdaa markaan rabo inaan sidaa sameeyo, qof ma ii sheegi karaa inuu xal leeyahay ama wax leeyahay?
Ku jawaab Enzo Alarcón
Ka fudud, adigoon soo dejisan waxna ... Soo galinta YouTube ee Chrome, dhig "request desktop version" oo daawo muuqaalka, quful shaashadda (ku dheji ogeysiiska) iyo voila
Ku rakib iyada oo la raacayo sharaxaad laakiin kama ciyaarayo gadaasha
Ku jawaab Nelson González
Waxaan filayaa inay shaqaynaysay wakhtigaas, si kastaba ha ahaatee, laga bilaabo taariikhda aan faallooyinkan qorayo, Noofambar 13, 2021 MA JIRO SHAQAYSIIN. Markaad furto arjiga, waxaa soo baxay shaashad ku weydiinaysa inaad u cusboonaysiiso nooca ugu dambeeyay. Oo waa wax aan macquul ahayn in laga tago halkaas.
Ku jawaab Zatlacast
Ma geli karo laakiin haddii aan rakibi karo waxaan rajeynayaa waan gali karaa
WAX WALBA WUXUU QAADAN YAHAY HADII AY SHAQAYNAYSO
Orodku wuu shaqeeyaa Ma weydiisanayo rukhsad gaar ah ama wax kale. Laakiin waxaa jira hal faahfaahin oo keliya ... waxaad siinaysaa marin aad ku hesho koontadaada gmail. Taasi aniga iima shaqeyso.
Markii aan isku dayo inaan galo koontadayda, waxay ku jirtaa wareeg oo kama gudbo shuruudaha iyo shuruudaha, qofna ma garanayaa sababta?
Google Play wuxuu kuu ogolaanayaa inaad tijaabiso codsi kahor intaadan rakibin